"Cudurka X wuxuu ku dhow yahay inuu ka halis badan yahay Covid" saynisyahannada ayaa ka digaya - SANTE PLUS MAG - TELES RELAY
Saynisyahannada ka diga - "Cudurka X wuxuu noqon lahaa mid dhow oo ka khatar badan Covid" saynisyahanno ka diga - SANTE PLUS MAG
By TELES RELAY On Feb 15, 2021
Cilmi-baare ka tirsan Jaamacadda Edinburgh oo ku taal Scotland, Mark Woolhouse ayaa aaminsan in ay lagama maarmaan tahay in la baaro dhammaan fursadaha ka soo bixi kara mustaqbalka. Waxaa xusay celcelis ahaan Ingiriisiga, baaqiisa digniinta wuxuu ku biirayaa kan Professor Jean-Jacques Muyembe Tamfu, oo ah khabiir ku takhasusay cilmiga Congo oo sidoo kale ka digay cudurka X, iyada oo loola jeedo fayrasyada cusub, ee aan la aqoon iyo kuwa dila.
Professor Muyembe - Source: Metro
Waa maxay cudurka X?
Sannad kasta, Ururka Caafimaadka Adduunka wuxuu dejiyaa liistada cudurada halista ah ee adduunka oo dhan, ayaa sharraxaya Sayniska iyo mustaqbalka. Dukumiintiga la daabacay wuxuu tixgelinayaa cudurada u baahan cilmi-baaris dheeri ah iyo ilaalin xooggan ama si loo kordhiyo waxtarka cudurka iyo daaweynta.
2018, intii lagu guda jiray kulan ka dhacay Geneva, waxay u bixisay magac ku meel gaar ah cudur mustaqbalka u horseedi doona faafitaan Dhulka, midkan oo wata magaca "cudurka X" dabeecaddiisa mala awaalka ah. Weli lama oga, waxay ku biirtay fayraska Zika, Ebola, Lassa fever, Bariga Dhexe ee neefsashada (Seas) iyo daran daran ee neefsashada (SARS). Laakiin taasi waxay ahayd iyada oo aan lagu xisaabtamin soo bixitaanka cusub ee coronavirus ee magaalada Wuhan, goorta "Cudurka X" wuxuu qaatay qaab loo yaqaan 'Covid-19'.
Professor Woolhouse, oo shaaca ka qaaday inuu ka mid ahaa saynisyahanada ku riixaya WHO inay ku darto magacan kumeelgaarka ah liiska mudnaanta cudurada, wuxuu sharaxayaa inay filayaan in aafada xigta ay noqon doonto fayras aan la aqoon. Waxa kale oo uu intaa ku daray in mid ka mid ah fursadaha laga wada hadlay uu ahaa coronavirus cusub, oo la mid ah Mers ama SARS. “Waxaan ula jeedaa, intaas kama sii badnaan karto intaas. Fayraskan cusubi wuxuu aad ugu dhow yahay SARS, sidaa darteed waxay xaqiiqdii u aqoonsadeen inuu yahay mid ka mid ah hanjabaadaha, ”ayuu yidhi khabiirka.
Professor Mark Woolhouse - Source: Metro
“Tilmaamida dhacdada dhifka ah marwalba way adag tahay
Mark Woolhouse oo la weydiiyay suurta galnimada in uu soo dhowaado cudurka “X”, wuxuu rumeysan yahay in xaaladdan ay tahay mid macquul ah. Isaga, maahan in cudur u muuqan doono, laakiin goorma. Si kastaba ha noqotee, saadaashu waa mid aan macquul aheyn in si hubaal ah loo soo bandhigo. “Sida iska cad ma garan karno goorta, dabcan. Habka saxda ah ee uu fiiruska u muuqdo had iyo jeer waa mid aan la saadaalin karin”, Ayuu raaciyay. Sababtaas awgeed, wuxuu tixgelinayaa in sida ugu wanaagsan ee fikrad looga helo mowduucan ay tahay in lagu saleeyo itimaalka tirakoobka.
Waxa kale oo ay tilmaamaysaa in hal ama laba fayras oo aadamaha loo gudbin karo ay saynisyahanadu ogaadaan 1 ama 2dii sanaba hal mar isla markaana heerkaasi uu ahaa mid joogto ah in ka badan konton sano. Natiijo ahaan, wuxuu rajaynayaa inay tani sii socoto mustaqbalka, laakiin waxa khiyaanada leh "waa in la aqoonsado kuwa dhab ahaan sababi doona aafada xigta," ayuu yidhi. Ra'yi ku biirey Michael Ryan, oo ah sarkaalka gurmadka degdegga ah ee WHO oo wacay intii lagu jiray shir jaraa'id gudaha u diyaarso hadda wixii ka “xumaan kara Covid-19”, sida uu shaaca ka qaaday Degdeg. Runtii, tan dambe waxay muujisay in heerka dhimashada Sars-CoV-2 uu ahaa "mid aad u hooseeya marka loo eego cudurrada kale ee soo ifbaxa", xitaa haddii ay tixgeliso gudbinta sare iyo dhimashada badan ee ay sababtay. Aragti tayo leh oo uu helay madaxa hay'adda UN-ka oo rumeysan inuu jiro wacyi gelin, si kastaba ha noqotee wuxuu xusuustaa inay lama huraan tahay in la muujiyo hami dheeri ah.
Dr Michael Ryan - Xigasho: WHO
Wicitaan si loo baaro dhammaan fursadaha
Waxaa wax laga weydiiyay siyaasadaha lagu dejiyay cadee khataraha la xiriira masiibo mustaqbalka, Professor Woolhouse wuxuu ka shakisanyahay in kan dambe ay yihiin mudnaanta xilligan, marka la eego dadaalada la abaabulay si loola dagaallamo Covid-19. Si kastaba ha noqotee wuxuu aaminsan yahay in tani ay lagama maarmaan tahay si looga hortago saameyntooda. Isaga oo tixraacaya xaalada caafimaad ee Boqortooyada Midowday (UK), wuxuu shaaca ka qaadayaa in xaalada dalku haatan ku sugan yahay ay ka fogtahay in lala xiriiriyo diyaar garow la’aan. Waxay lahaayeen “Qorshooyin bisil oo casri ah” si looga jawaabo hargabka faafa, wuxuu hoosta ka xariiqay Kaliya, waa fayraska Sars-CoV-2 oo soo muuqday.
Daryeel bixiye u diyaargaroobaya inuu daaweeyo bukaannada Ebola - Source: Metro
"Nasiib darro, sida aan jeclahay inaan u sharraxo, waxaan qabannay shaqo badan, waxaan sameynay dib-u-fiirinteenna, waxaan aadnay qolka imtixaanka, waxayna na siiyeen mowduuc khaldan", ayuu sii waday khabiirka. Dhamaanteen waxaan diyaar u nahay inaan wajahno hargabka faafa oo wax kale ayaan helnay halkii", ayuu raaciyay. Dareenkan, casharka weyn ee uu ka bartay dhacdooyinkan oo uu dhowr sano u doodayay hadda maahan inuu ku koobnaado inuu ku ekaado hal aragti keliya. “Noqo qof maskax furan oo sahamiya fursadaha kala duwan,” ayuu ka digay Professor Woolhouse. "Waxaan gabi ahaanba u baahanahay inaan ka feejignaano dhacdooyinkan, laakiin waxaan u maleynayaa in kulankaan la isku dayayo in aan qiyaaso waxa soo socda uu yahay mid qatar badan," ayuu carabka ku adkeeyay. "Waan ciyaarnay, waxayna naga dhigtay xumaan," ayuu yiri, isagoo intaas ku daray in waaya-aragnimada aan lagu celin.
Maqaalkani wuxuu u muuqday markii hore https://www.santeplusmag.com/la-maladie-x-serai-imminente-et-potentiellement-plus-mortelle-que-le-covid-avertissent-les-scientistiques/
Ku noolow banaanka dhismaha Valdebebas kahor Real Madrid vs. Dib u bilaabashada Eibar La Liga - Video
Dibadbaxayaasha Burma ayaa ku hanjabay 20 sano oo xabsi ah
Après avoir été dénoncé par des parents d’élèves à cause de ces photos « jugées…